Posted by တန်ခူး at 9:28 AM
မတန်ခူးရေ အစ်မအပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရပုံက ရယ်စရာလေး။
သီးစုံချဉ်ရည်လို့ ဖတ်ရတော့ စားတောင် စားချင်လာတယ်။
ဆုလေးတောင် မှတ်မိသေး… အစိမ်းရောင်ပလပ်စတစ်ရေခွက်လေး….
နေမကောင်းဖြစ်နေ ပါရွေ့ဘလော့ ရေးနေပါသည်။
အစ်မကအပြေးသန်တာပဲ ဆုရပါတယ်ဆိုမှ အဖေကရိုက်ရသေးတယ်နော်း) ခံစားချက်နှစ်မျိုးပေါ့နော့် ဆုရလို့ ပျော်တယ် အဖေရိုက်မှာကိုတော့ကြောက်တယ် အဲ့ခံစားချက်လေး မိုက်တယ်ဗျ........။
သီးစုံချဉ်ရည် ဟင်းလေး ချက်ကျွေးပါ လားဟင်
အမတန်ခူးက အပြေးလည်း သန်ပါ့။ သီချင်းကလည်းဆိုလိုက်သေးတယ်။
ဒါတွေကို အမအမျိုးသားက ချစ်နေတာပဲနေမယ်။
အမတန်ခူးရေ.. နေကောင်းသွားပြီလား အမ။ အမက အတော်လေးမှတ်မိတာပဲ။ ကျနော်ဆို တော်တော်များများ မေ့ကုန်ပြီ။ အမ သီချင်းဆိုတဲ့ပုံကို မြင်ယောင်မိတယ်.. ချိုချဉ်တွေ အတော်မှ ရခဲ့လား အမရေ.. :)
`ပြာမှိုင်း.. တောင်တန်းတွေ နဲ့ ၀ိုင်းနေ..ကွေ့ကောက်ရစ်ပတ် တဲ့.. တောင်ပြာတန်း.. ဧရာဝတီ..ချင်းတွင်း ..သံလွင်နဲ့.. အနောက်ဖက်..တောင်ကုန်းမြင့်..အရှေ့ဖက်လွင်ပြင်..စိမ်းလန်းကျယ်ဝနးတယ်..ရေကြည်ရာသွား..မျက်နုရာဖွေတဲ့..
အဲဒီ တူးတူး အခွေလေး လား မသိဘူး။
အင်း..မျက်နု ရှာရင်း..မျက်တွေ ရင့်လာနေပြန်တာပဲ။
မတန်ခူးနဲ့ ကျနော် ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့ အပြင်စာ တူတယ်။
အပြေးပြိုင်ပွဲ ဆုရပုံလေး ရေးထားတာ မျက်စိထဲတောင် မြင်ယောင်တယ်။ :)
အင်း..အသောလေးနဲ့ ရေးသွားပုံထောက်တော့ အတော် နေကောင်းလာပြီပဲ။
စစ်တိုက်တုန်းက လက်သေနတ်နဲ့ ပစ်တာကို အမ တန်ခူး ပြောပြမှ သတိရတယ်။ ဟုတ်တယ်နော်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်သေနတ်တွေ ရှိနေသားပဲ။ :P
ကျနော်တွေးမိတာက ....ဆရာတော်ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ဒီသီချင်းနဲ့ ...ဟီးဟီး။
မုန့် ဘိုးကလည်းရသေးတယ်ဆိုတော့....
I cannot see all ur posts coz no Myanmar font.
ama, r u fine now?
နေမကောင်းလှတဲ့ကြားက ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
သက်ဝေ တစ်ယောက် Tag တုံးက Tag ပြီး ရေးထားတာတော့ ချက်ချင်းလာ မဖတ်ဖူးလို့မထင်ပါနဲ့ နော်..။ မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းထဲက ဖတ်ပြီးတာပါ။ အချိန်မရလို့Comment မရေးခဲ့ရတာ..။ အခုကြည့်လိုက်တော့... အားပါးပါး.. Comment တွေ တော်တော်တောင်များနေပါပေါ့လား..။
တန်ခူးရဲ့ပထမဆုံးတွေက ပျော်စရာ.. ချစ်စရာ...။
တန်ခူးဆိုပြရင် နားထောင်ချင်တဲ့သီချင်းက ရှင်ငရဲကြီးလိမ့်မယ်... အယ်.. အယ်.. အယ်...။
ချက်ကျွေးရင် စားချင်တဲ့ဟင်းက သီးစုံချဉ်ရည်..။
ဘလော့ဂ်မှာ ပိုစ့်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ချင်တာက ပထမဆုံး ရီးစားစာ...။ ဟီဟိ...။
သက်ဝေကို "စိတ်ထဲမှာ အပြင်က ကိုယ်ခင်လက်စ သူငယ်ချင်း တယောက်ယောက်လို့ ခုထိထင်တုန်း" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးဖတ်လိုက်ရတော့... တန်ခူးကို ပိုခင်သွားရင်း စိတ်ထဲကလဲ အင်း.. တစ်နေ့ နေ့ ပေါ့... တစ်နေ့ နေ့ ပေါ့... လို့ ...။
ပထမဆုံးပြောချင်တာက သီးစုံချဉ်ရေဟင်း စားချင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူကို လာလည်ရင် ပထမဆုံး တွေ့ချင်တာက အမတန်ခူးဆို ယုံမလားးးး
ချင်.ယုံ ။ တို.ကိုလည်.ခင်တယ်တဲ. မြတ်နိုးက။ ဒါပေမဲ. ဟုတ်မှာပါ။ တို.ကို အဲလိုတော. မပြောဘူးပါဘူး။ :P
ပထမဆုံးတွေကို လာဖတ်သွားပါတယ် အစ်မ။
အမတန်ခူးရေ .. တကယ် ရေးပြီး တင်ပြီးပြီနော် လာသတင်းပေးတာ
ပုံရိပ်ရေ… ငယ်တုန်းက အဲလောက်ဆိုးပါသည်… အိမ်လာလည်လေ… သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်း ချက်ကျွေးမှာပေါ့…
မမရေ… ကော်မန့် တွေ အများကြီးပေးသွားတာရယ် ဆရာမနာမည်ဝိုင်းစဉ်းစားပေးတာရယ် အတွက် ကျေးဇူးပါ… ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်းလို့ ထင်တာပဲ…
မောင်မျိုးရေ… အပြေးသန်ပေမယ့် အဖေရိုက်တော့ မပြေးရဲတော့ဘူးလေ….
အိမ်လာလည်ရင် ချက်ကျွေးမယ် skyblueရေ…
မဇနိရေ… သားလေးပုံ ဖိုးရွှေလိပ်လေးမှာ တင်ထားတယ်နော်…
ဘုန်းဘုန်းကို ညာစားတာနုရေ… တခါတခါ ကာတွန်းရုပ်လေးတွေနဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အသေးလေးတွေတောင် စွန့် ပေးသေးတယ်…
ကေရေ… အမှန်ပဲ…အဲဒီအခွေ… မြက်တွေကတော့ ကြာလာလေ ပိုရင့်လာလေနော်…
ခုလို လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ ကိုအောင်သာငယ်… ကျွန်မက ကိုအောင်သာငယ်ရဲ့ မူရင်း ပထမဆုံးများနဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖတ်ပြီးမှ ရေးဖြစ်တာပါ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
အဲဒီစာအုပ်လေးကို စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ အကြောင်းက နောက်တခုရှိသေးတယ် ကိုစေးထူးရေ… ခုတော့ ပြောလို့ မဖြစ်သေး… ကျွန်မ ပြန်ဖတ်တာ ၅ ခေါက်ရှိသွားပြီ… နောက်ဆုံးအခေါက်ဖတ်ပြီးတုန်းက ခိုင့်အကြောင်းကို အတော်တွေးဖြစ်လိုက်တယ်…
ဟုတ်ပါရဲ့ ရွာသားလေးရေ… ပထမဆုံးဖတ်မိပြီး ပထမဆုံး စွဲလန်းသွားတဲ့ ၀တ္ထုပေါ့…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… တကယ်တော့ ဘုန်းဘုန်းက သီချင်းနားထောင်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး… ကလေးနဲ့ မလိုက် ပဲများတာကို ရယ်ချင်လို့ လေ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ပြန်မြင်ပြီးရယ်ချင်တယ်…
သက်ဝေရေ… ပထမဆုံးရီးစားစာတော့ မတင်ပါရစေနဲ့ ကွယ်… တော်ကြာ ဘလော့ဂ်လိုင်စင်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်… သက်ဝေပြောတဲ့ တနေ့ နေ့ ရောက်ရင်…ဟယ်..ထင်သားပဲ… သက်ဝေက xxxx ကိုးလို့ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး…
ညီမလေးမြတ်နိုးရေ… စင်္ကာပူကို လာရင် တို့ နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ ပြီး သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်းကို ပထမဆုံးချက်ကျွေးမှာ…တကယ်… အစီအစဉ်ရှိရင် အီးမေးလ်ပို့ လိုက်နော်…
မမရေ… မြတ်နိုးက တူတူပဲတဲ့… မြတ်နိုးရေ…ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
ကောင်းကင်ကိုရော… ပထမ မဆုံးဘူးလား… တက်ဂ်ထားတာတွေ့ လိုက်တယ်…
ညီမလေးလှိုင်ရေ… ရေးပေးတာကျေးဇူးပါ… ဖတ်လို့ ကလဲ အရမ်းကောင်း…
သူဇာမောင်မောင်တဲ့… မျက်မှန်လေးနဲ့ ဆံပင်တွန့် တွန့် လေးနဲ့ … အမြဲပြုံးပြီး သဘောအရမ်းကောင်းတာ… သူကတော့ မှတ်မိပါဦးမလားမသိ…
sis, she also my uni friend:)